सिंहदरबार अगाडि भेटिए अनमोल र सुहाना ! - नेपालबहस
सिंहदरबार अगाडि भेटिए अनमोल र सुहाना !
| ११:५३:०८ मा प्रकाशित
२८ फागुन, काठमाडौं । नायक अनमोल केसी र नायिका सुहाना थापा बिहिबार बिहान काठमाडाैंको सिंहदरबार अगाडि एक गीतको छायांकनमा व्यस्त थिए । डेढ महिना ब्रेक लिएर चलचित्रको तेश्रो चरणको छायांकन बिहिबारदेखि हिजाेदेखि सुरु भएको हो ।
काठमाडाैंमा चलचित्रकाे छायांकन सकेर यसको निर्माण यूनिट डोल्पा लागेको छ । डोल्पामा रहेको शे–फोक्सुन्डो तालमा चलचित्रको एक गीतको छायांकन हुनेछ । चलचित्रको छायांकन लकडाउन अगाडि नै सुरु भएको हो ।
तर, लकडाउन भएपछि छायांकन रोकियो । कात्तिक १ गतेबाट चलचित्रको दोश्रो चरणको छायांकन सुरु भएको थियो । चलचित्रको छायांकनको कुनै पनि तस्वीर यसको निर्माणपक्षले सार्वजनिक गरेको छैन ।
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ले बम्पर व्यापार गरेपछि दर्शकले यो जोडीको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । झरना थापाको निर्देशनमा बनिरहेको यो चलचित्रलाई सुनिलकुमार थापाले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा संजय लामाको छायांकन छ ।
आज र भोलि हावाहुरी र चट्याङसहित पानी पर्ने ५ दिन पहिले
महिलालाई इच्छाविपरीत वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराउने पक्राउ २ दिन पहिले
राष्ट्रपतिद्धारा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्त २ दिन पहिले
सामान्य विवादमै खुकुरी प्रहार साथीको हत्या गर्ने खुलाल पक्राउ ५ दिन पहिले
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ५४ विद्यालय छनोट ४ दिन पहिले
महामारीपछि अमेरिकी साप्ताहिक बेरोजगार सङ्ख्या सात लाख भन्दा कम ४ हप्ता पहिले
पोखराका अम्गाई र सापकोटालाई सर्वोकृष्ट लोकदोहोरी सम्पादन र छायांकन अवार्ड ४ महिना पहिले
जङ्गली हात्तीले सामुदायिक वनमा छावा जन्मायो ६ महिना पहिले
काठमाडौंमा लकडाउन छ र ? प्रधानमन्त्री ओली ११ महिना पहिले
खोला र नदीको दूषित पानी पिउने बाध्यता हटाउन रिचार्ज पोखरी निर्माण २ वर्ष पहिले